Pakistan Oo Ogolaansho Sharrudaysan Siisay Tukashada Salaadaha Bisha Soon. AwdalMedia Awdal Media Pakistan Oo Ogolaansho Sharrudaysan Siisay Tukashada Salaadaha Bisha Soon.
Pakistan Oo Ogolaansho Sharrudaysan Siisay Tukashada Salaadaha Bisha Soon.
Pakistan ayaa ka qaaday xariyaadii saarneyd masaajidda si loogu tukado bisha Ramadaan, balse waxay soo rogtay talaaboyin kale oo lagu xakameynayo in uu cudurka faafo.
Pakistan ayaa ah wadanka labaad ee Muslimiinta ugu badan ku noolyihin caalamka ayaa lagu ku soo rogay xayiraad bil ka hor, iyagoo waqtigan masaajida loo ogolaaday fasax ay shuruud ku xiran tahay waxaana la amray inay raacaan dadka awaamirta cusub.
Dowladda ayaa ogolaaday in masaajid walbo ay ku tukan karaan tiro cayiman, waxayna amartay in qof kasta oo masaajidda galaya loga baahan yahay inuu xirnaada marada gafuur xirka, iyadoo sidoo kale y dawladu go’aamisay in dadka cibaadeysanaya ay kala fogaan doonaan ila 2 mitar, amaradaasina waxaa hirgelin doono maamulka masjid kasta, ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay dawlada Pakistaan.
Pakistan ayaa diwaangelisay 7638 xaaladood oo Corona ah, iyo 143 dhimasho la xiriirta cudurka. Khuburada caafimaadka ayaa ka digaya in salaadaha jameecada ay horseedi karta inuu ku faafo cudurka dalkaasi oo ay ku nool yihiin in ka badan 200 Milyan.
Dowladda ayaa wajaheysay cadaadis ku aadan xayiradaha ay ku soo rogtay salaadaha jameecada, isku dhacyo u dhaxeeyay booliska iyo dad ku sugnaa masaajida ayaa ka dhacay magaalada ugu weyn dalkaasi ee Karachi. Horantii todobaadkan, culumada qaar ayaa ku hanjabay inay jabin donaan xayiraadda, waxyna sheegeen in salaada ay muhiim u tahay qofka Muslimka ah ayna tahay in loo oggolaado.
Iyadoo ay dowladda qaaday xayirada ayaa hadana waxay sheegtay inay ka laaban karto go’ankaas haddii lagu xadgudbo shuruudaha ay soo jeedisay.Rai’sul wasaraha dalkaasi Imran Khan ayaa maalintii Talaadada ku dhawaaqay 14 beri oo dheeri ah oo lagu daray xayirada balse waxa uu khafiifiyay xayiraadihii saarna warshada muhaimka ah si looga baaqsado dhibatada dhaqaale xilli Hey’adda Lacagta Adduunka iyo Baanka Dunida ay ka deyrinayaan dhaqaalaha dalkaasi.
Dowlada Somaliya Oo Xarunta Dhexe Ee COVID-19 ka Hirgelisay Muqdisho.(Sawirro)